Fandaharam-pahaizana momba ny Chemistry mahomby mampiasa siramamy na sukrose
Fikarohana momba ny sikiômatika
Mampiroborobo vatomamy vatokely mba hianatra momba ny toetra simika sy ny firafitry ny siramamy. Ann cady, Getty Images
Ny sira dia iray amin'ireo zavatra simika ao amin'ny tranonao amin'ny endrika madio. Ny siramamy fotsy tsotra dia diovina . Azonao ampiasaina ny siramamy ho fitaovana enti-manamboatra simia. Ny tetikasa dia mifototra amin'ny sakafo azo antoka (satria siramamy no azo hanina) ho an'ny adult-supervision-ihany (satria ny siramamy dia mirehitra). Tsindrio raha hijery ny sasany amin'ireo zavatra azonao atao amin'ny siramamy ...
Ampiasao ny Sugar mba hanamboatra vatokely
Manaova vatomamy rock mba handinihana ny firafitry ny siramamy (ary noho izy mamomamo). Judd Pilossof, Getty Images
Ny fomba tsara iray hianarana momba ny fananana siramamy dia ny hitazona azy io. Ny kristaly siramamy vita amin'ny kofehy sy mofomamy dia antsoina hoe vatomamy rock. Eritrereto ny fiantraikan'ny fifamatorana mifandraika amin'ny sucrose amin'ny fomba famitahana azy ao anaty rano mba hahatonga ny vahaolana kristaly. Ahoana no maha samy hafa ny endriky ny vatomamy vatomamy vatosoa noho ny fisian'ny kristaly sikla eo ambanin'ny fitaratra ?
Andramo ny Candy Recipe Candy
Miala amin'ny manga Blue Sugar Crystal Meth
Kitapom-panala manga vita amin'ny Blue Blue Crystal Rock. Mike Prosser, Flickr
Ireo mpankafy ny fandaharana ny fahitalavitra Breaking Bad dia afaka manamboatra ny siramamy siklaika mahazatra mba hamokarana vokatra vita amin'ny manga vita amin'ny manga sy mavo, Walter White. Raha miasa amin'ny tetikasa ianao dia afaka mandinika ny simia tena izy ao anatin'ny andiam-pahitalavitra .
Grow Blue Sugar Sugarsticks - Breaking Bad Style
Rainbow Sugar ho an'ny Column Density
Ampiasao ny avana amin'ny alalan'ny fitotoana ny vovo madinika indrindra amin'ny farany ambany sy ny farafahakeliny faran'izay kely indrindra. Amin'ity tranga ity, ny vahaolana amin'ny siramamy indrindra dia mandeha amin'ny farany. Anne Helmenstine
Ny fomba iray handrindrana ny ranon-drano dia ny manondraka rano mangatsiatsiaka amin'ny iray izay manintona kokoa. Ohatra, afaka maneho tsotra ny solika ianao dia maivana noho ny rano toy izany (ary koa fa tsy azo ovaina ny solika sy ny rano). Saingy, tsy voatery hampiasa zavatra simika isan-karazany ianao mba handrefesana azy ireo. Azonao atao fotsiny ny mifantoka kokoa ny takaitra ambany kokoa noho ireo ambony. Andramo ny tenanao amin'ny fampiasana vahaolana siramamy.
Ataovy ny tsangantsanganana ny kibonao
Ampiasao ny Sugar mba hanamboamboam-peo mainty
Ny afon-tsetroka dia mandoro firehetana ho toy ny lavenona misy lavenona. Kain Road Cul de Sac, Flickr
Ny sira dia karazana karbidra , izay midika fa solam-biriky ao amin'ny vatanao izany. Bisy ihany koa ny fanehoan-kevitra momba ny simika. Azonao atao, ohatra, ny mampiasa siramamy mba hanaovana fakana kitapo mainty hoditra. Tsy nipoaka ireo afomanga ireo - navoakan'izy ireo ny andry misy mainty.
Manaova fanandramana miloko mainty
Ampiasao ny Sugar mba hanamboarana baomba mandatsa-dranomaso
Afaka mihazona baomba mandatsa-dranomaso ianao, saingy azo antoka kokoa ny manazava azy io eo amin'ny tifitra mampidi-doza. Leslie Kirchhoff, Getty Images
Ny chemistry dia ao am-pon'ny endrika pyrotechnic. Raha mitebiteby ny lozanao mainty noho ny faniriana fialamboly bebe kokoa, manandrama manao baomba mandatsa-dranomaso. Mila fitaovana roa fotsiny ianao mba hanandrana an'ireto: siramamy sy nitrate potassium.
Manaova baomba mandatsa-dranomaso
Ampiasao ny Sugar mba hanomboka afo tsy misy lalao
Ny afo dia ny porofo hita maso momba ny fiakaran'ny afo. CSA Images / Snapstock, Getty Images
Ny famonoana dia fiantraikan'ny simika. Na dia matetika izy io aza dia manomboka amin'ny fampiharana loharanom-pahasalamana, toy ny lalao, azo atao ny manomboka afo raha tsy mampihena hery ara-pototra. Ohatra, misoroka siramamy miaraka amin'ny chlorate potassium ary jereo izay mitranga raha ampidirina ny solifara solifara asidra!
Andramo ny fihetsiketsehana afo avy hatrany
Ahoana no mba hampitombo ny alaola matevina amin'ny ala Kromium
Rano - divay - Milina - Fihetsiketsehan'ny mpizara basy
Ahoana ny fomba hanampiana kristaly
Mora ny manamboatra Blue Fire, toy izao
Tetikasan'ny tetikasa momba ny Siansa momba ny Siansa: Sharks
PIERCE - Faminaniana sy Tantaram-pianakaviana
Niresaka momba ny fifanaraham-piarahamonin'ny USAID migración
Tantara of Memory Memory
Fifandraisan'ny Profesora-mpianatra: Inona no Ilainao Fantarina?
Open book 01.svg Endrik'anarana francenworms Endrika ploraly an'ny teny francenworms
Ireo loharanon-kolejy azonao ampiasaina matetika
Famaritana momba ny isam-bolana sy ny ohatra
Cup 2013 Solheim: Mitarika an'i Dominant Europe ny Perfect Hedwall
Jan Matzeliger sy ny History of Shoe Production
Alohan'ny hividiananao fanomezana ho an'ny namanao ara-panahy
Anjely, vavaka ary fahagagana
The Wizard Real-Life Behind "Harry Potter"
Favorite Brands of Figure Skating Hats
Tena Anjely Matianina ve ny Olona Rehetra?
Baltic Amber - 5.000 taona an-tranonta iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fôsily voajanahary
Manoratra fanefa ho an'ny paragrafy
Inona no Ohatra Indraindray?
Ny fomba fiteny Frantsay maro miaraka amin'ny 'Avoir' ('Hanana')
10 Tsy maintsy mijery sarimihetsika momba ny mpamosavy sy ny mpamosavy
Gymnastics olympika: Ny fitsipi-pifehezan'ny lahy sy ny vavy, fitsipika, ary fitsarana